अर्थ Archives - Nagarik Today
माघ ८ २०७८, शनिबार
होम » अर्थ
by नागरिक टुडे माघ २, २०७८
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा साताको कारोबारको पहिलो दिन आज आइतबार उच्च अंकको वृद्धि भएको छ । आज नेप्से ६९ अंकले बढेर दुई हजार ९ सय २६ दशमलब ७४ विन्दुमा पुगेको हो । त्यस्तै, आज कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ । ९ अर्ब ६७ करोड ६३ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । बिहिबार नेप्सेमा ६ अर्ब ६६ करोड ९७ लाख बराबरको कारोबार भएको थियो ।
नेप्सेका अनुसार आज तीन कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि हुने कम्पनीहरुमा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । यी कम्पनीको शेयरमूल्य आज सर्किट लेभलमा बढेका छन् । त्यस्तै, कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी अरुणभ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको भएको छ । यस कम्पनीको आज ३६ करोड ४३ लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।
माघ २, २०७८0comment
साताको पहिलो दिन आज आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २९ सय ३९ अंकमा पुगेको छ । २८ सय ७३ अंकबाट कारोबार सुरु भएको नेप्से परिसूचक बढेर २९ सय अंक माथि पुगेको हो ।
यसक्रममा यो समाचार तयार पार्दासम्म परिसूचक ८१.३० अंकले बढेको छ । यस्तै, पाँच अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ९६ लाख ५४ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
भगवती हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो: कस्तो छ कम्पनि? कति दिने आबेदन?
by नागरिक टुडे पुस २२, २०७८
भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया शुरुवात समेत गरिसकेको छ ।
साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कम्पनीले सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणमा प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० दरका १४ लाख ३० हजार १६२ कित्ता साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको हो ।
सम्झौतामा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डे र सिद्धार्थ क्यापिटलका चन्दन कार्कीले हस्ताक्षर गरे ।
पुस २२, २०७८0comment
सनराइज बैंकको ‘सम्पूर्ण बचत खाता’
काठमाडौ । सनराइज बैंकले आफ्ना ग्राहकको सुबिधालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ बचत खाता संचालनमा ल्याएको छ । सन्राइज सम्पुूर्ण बचत खातामा ग्राहकले उच्चतम ब्याजदर पाउनका साथै विभिन्न सेवाहरुको फाइदा लिन सक्ने छन् । उक्त खातामा बैंकले पाँच वर्षका लागि निशुल्क मोबाइल बैंकिग र भिसा डेबिट कार्ड दिने छ । साथै एक वर्षका लागि डिम्याट खाता र मेरो शेयरको शुल्क नलाग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय भिसा यात्रा कार्ड जारी गर्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट समेत प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यो खातामा ग्राहकले ८० हजार रुपैया सम्मको अस्पताल भर्ना खर्च र २० हजार रुपैया सम्मको ओपिडी खर्च बिमाका साथै ५ लाख रुपैया सम्मको दुर्घटनाको बिमा सुबिधा पाउने छन । बैंकका अनुसार अस्पताल भर्ना बिमा वर्षमा ३ पटकसम्म दाबी गर्न सकिने छ । यस स्वास्थ्य बिमा योजना भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा समेत दाबी गर्न सकिने बैकले जनाएको छ । हाल बैंकको १ सय ३९ शाखा, १२ एक्सटेन्सन काउण्टर, १ सय ५७ ए.टि.एम र ८३ शाखारहित बैंकिग सेवा मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकको साधारण सभा
काठमाडौ । नेपाल एसबिआई बैंकको २८औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभाले बैंकको आ.व. २०७७/७८ को संचालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण, २०७८ असार मसान्तको वासलात, आ.व. २०७७/७८ को नाफानोक्सान हिसाब र सोही अवधीको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरुलाई पारित गरेको छ ।
सभाले बैंकका शेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीमा ५.३१ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट संचालक समितीमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकमा अप्सरा उप्रेतीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । सभाले बैंकको सहायक कम्पनी ‘नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिग’ को आ.व. २०७७/७८ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण समेत स्वीकृत गरेको छ ।
सभाले आ.व. २०७८/७९ मा बैंकको लेखापरीक्षण गर्नका लागि मेशर्स एस.ए.आर. एसोसियट्स्, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स्लाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गरेको छ । साथै,सभाले बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका विविध दफा,नियममा संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । सभाले बैंकको तर्फबाट अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने,गाभिने वा प्राप्ती गर्न आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा प्राप्ती गर्ने,गराउने सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्न÷गराउन सक्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राजस्व छलिमा ढकाल बिरुद्ध साढे २ अर्बको मुद्दा दर्ता – ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान बिभागले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य अभियुक्तको रुपमा राजस्व छलिको मुद्दामा शोभाकान्त ढकाल मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले ढकालविरुद्ध बिगो र जरिवाना गरी २ अर्ब ४० करोड बडी रुपैयाँ असुली र ३ वर्ष कैद सजायको मागदाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मंगलबार मुद्दा दर्ता गरेको हो । विभागले ढकालसहित उनकी पत्नी उमाकुमारी ढकाल तथा परिवारका सदस्य सरोज ढकाल, सान्टु श्रेष्ठ र राजेश्वर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको हो । विभागका अनुसार ढकाल र उनीसहितको समूहले काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–१ ठेगाना उल्लेख गरी दर्ता भएको आनसान इन्टरनेशनल प्रालिबाट मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नक्कली तथा झुटा विवरण तयार पारी राजस्व छलि गरेको पाइएको बताइएको छ ।
आनसान इन्टरनेशनल प्रालिबाट राजस्व चुहावट गर्ने मनसायले जालसाजीयुक्त, नक्कली तथा झुट्टा मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण, बित्तीय विवरण तथा आय विवरण तयार गरी कारोबार नै नभएको देखाइ राजस्व चुहावट गरेको आरोप बिगभाले लगाएको छ । विभागले प्रतिवादी बनाएकामध्ये शोभाकान्त,सरोज। उमा कुमारी र सान्टु आनसान इन्टरनेशनल प्रालिका सञ्चालक तथा पदाधिकारी हुन । त्यस्तै, राजेश्वर आनसानको लेखा परीक्षण गर्ने फर्म राजेश्वर एण्ड कम्पनीका सञ्चालक हुन।
उनीहरुले भ्याटतर्फ ४२ करोड २६ लाख ७ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ, आयकरतर्फ ६८ करोड ४८ लाख २६ हजार ९७ रुपैयाँ र लाभांशतर्फ ९ करोड ४७ लाख ८४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ गरी १ अर्ब २० करोड ४९ लाख १७ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलि गरेको देखिएको बिभागले जनाएको छ । विभागले उनीहरुविरुद्ध १ अर्ब २० करोड ४९ लाख १७ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना समेत हुने भन्दै २ अर्ब ४० करोड ९८ लाख ३५ हजार ६४८ रुपैयाँ असुली र ३ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरेको हो ।
धादिङकाे मलेखुमा खुल्याे सानिमा बैंकको शाखा
धादिङ । सानिमा बैंक लिमिटेडले धादिङको मलेखुमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले आज मंगलबार, एक कार्यक्रमका वीच बेनिघाट रोराङ गाँउपालिका– ३ स्थित मलेखुमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको हो ।
बैंकले उक्त शाखाबाट ग्राहकलाई अत्याधुनिक बैंकिङ सुविधाहरू उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यससँगै बैंकको कूल शाखा संख्या ९१ र पुगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले जानकारी दिए ।
बैंक उद्घाटनका लागि बैंकका ब्राण्ड प्रवर्द्धक वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य मलेखु आएका थिए । त्यस्तै कलाकारद्वय श्रेष्ठ र आचार्यसँगै बेंकका सञ्चालक बलराम पराजुली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालको उपस्थिती रहेको थियो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा धादिङका संघीय सांसद भुमीप्रसाद त्रिपाठी, गाँउपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी र उपाध्यक्ष देवीप्रसाद सिलवाल लगायतले बैंकलाई शुभकामना दिएको बैंकका शाखा प्रमुख रमेश पण्डितले जानकारी दिए । योसँगै बैंकको धादिङ जिल्लामा मात्र तीन शाखा पुगेको छ ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सीईओमा श्रवण रावल
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा श्रवण रावल नियुक्त भएका छन् । आज बिहान बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले रावललाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो। आज पुस २० बाट लागू हुने गरी रावललाई ४ वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि रावललाई कम्पनीमा कामु सीईओको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सेञ्चुरी बैंकको लाभांश घोषणा
by नागरिक टुडे पुस २, २०७८
काठमाडौं– सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ६.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शुक्रबार सम्पन्न बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पूँजीको ५.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांश नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण हुनेछ।
पुस २, २०७८0comment
सामान्य अंकले घट्यो नेप्से
साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले घटेको छ । बुधबार सेयर बजार चार दशमलव २३ अंकले घटेर दुई हजार चार सय १४ दशमलव ६२ बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको हो ।
बजारमा २२८ वटा कम्पनीको ९८ लाख कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा चार अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी कारोबार गर्नेमा महालक्ष्मी विकास बैंक छ । बैंकले १६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार गरेको छ ।
नेप्सेका अनुसार ९० वटा कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि हुँदा ९२ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बाँकी सातवटा कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ । बैंक, माइक्रोफाइनान्स, होटल एण्ड टुरिजम, लाइफ इन्स्योरेन्स र अन्य कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बाँकी सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ ।
दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर, सामलिङ पावर कम्पनी, मल्टिप्रपोस फाइनान्स, आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीलगायतको सेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा मूल्य घट्ने कम्पनीहरूमा नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था, सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, मञ्जुश्री फाइनान्सलगायत छन् ।